Global Voices teny Malagasy » Manome sehatra ho an’ny vehivavy sy ny sehatra hafa atao an-jorombala ao Indonezia ny gazetiboky Magdalene · Global Voices teny Malagasy » Print
Manome sehatra ho an'ny vehivavy sy ny sehatra hafa atao an-jorombala ao Indonezia ny gazetiboky Magdalene
Voadika ny 23 Avrily 2018 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Harsianti Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta
“Magdalene aho. Miaty ny fimaroana aho.” Sary avy amin'ny Magdalene, nahazoana alalana.
Hatramin'ny taona 2013, namoaka lahatsoratra miresaka momba ireo tovovavy sy vehivavy, ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina lesbiana sy pelaka, ireo manana taovam-pananahana roa ary ireo niova satan-karazana (LGBT ), ary ireo vitsy an'isa ara-pinoana ao Indonezia ny Magdalene .
Navoaka ity famoahana antserasera ity mba hanomezana sehatra ho an'ireo mpanoratra te-hametraka lohahevitra fady ao amin'ny firenena izay ahitana Silamo mahery fihetsika mandrisika an-kerisetra ny manampahefana mba hampihatra ny finoany ara-pivavahana eo anivon'ny fiarahamonina.
Indonezia no firenena lehibe indrindra manerantany ahitana mponina miozolomana maro an'isa. Ny foto-kevitr'izy ireo amin'ny maha-firenena azy dia ahitana ny fampiroboroboana ny fahamaroana, ny fahalalana onony, ary ny foto-kevitra firindrana ara-pinoana fantatra amin'ny anarana hoe Pancasila .
Ity ambany ity ny fanambaran'ny  Magdalena:
Ny Magdalene dia vokatry ny vinanay amin'izany hoe gazety an-tserasera manome fomba fijery vaovao ankoatra ny fetra mahazatra amin'ny maha-lahy sy maha-vavy sy ny ara-kolontsaina. Mampiseho ny feon'ny feminista, ny fahamaroana sy ny fahalianam-pandrosoana izahay, na ireo izay tsy matahotra ny ho hafa, na inona na inona volonkoditra, fironana ara-nofo, na lahy na vavy. Mikendry ny hampandray andraikitra izahay fa tsy hanimba.
Mpanao gazety teo aloha Devi Asmarani, Hera Diani sy Karima Anjani no mpanorina ny Magdalene. Nolazain'izy ireo tamin'ny resadresaka vao haingana fa nikasa hanangana gazetiboky antserasera azo ampiasaina ho sehatra famakiam-boky hafa ho an'ny vehivavy  izy ireo tany am-boalohany. Nanazava  bebe kokoa i Asmarani:
Te-hanasongadina ireo olana lehibe … ireo olana ara-pandrosoana izay tsy mahazo lohateny betsaka amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra noho ny antony fa fady izahay
Taorian'ny dimy taona, nanohy namoaka tantara izay tsy dia raketin'ny fampahalalam-baovao mahazatra matetika ny Magdalene. Ahitana lohahevitra toy ny LGBT, ny fahamaroana , ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanalam-baraka vatana  ireo lohahevitra saro-pady ireo.
Nanangana ekipa mpanoratra mpanoka-tena sy fitomboan'isan'ny mpamaky tsy mitsahatra manohana ny fanambaran'ny tranonkala izy.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra feno fankasitrahana avy amin'ireo mpamakin'ny Magdalene:
Iray amin'ireo tranonkala mpamoaka vaovao isan'andro vakiako hatrany, izaho, amin'ny Silamo ahy dia tena nahazo aingam-panahy avy amin'ny votoaty isan-karazany ihany koa.
Such an important piece!👏 Good to know that I'm not alone in this situation. I'm a feminist & I've been struggling w/ the concept of religion. “We question our social circles. We are not comfortable with the way our family members, relatives, and friends see the world.” INDEED😳https://t.co/FYzfb3O7tN 
Lahatsoratra tena zava-dehibe! Tsara ny mahafantatra fa tsy irery aho amin'ity toe-javatra ity. Vehivavy feminista aho ary niady tamin'ny ny foto-kevitra ara-pinoana. “Manontany ny sehatra fiarahamonintsika aho. Tsy mahazo aina amin'ny fomba fahitan'ny fianakaviantsika, ny havantsika, ny namantsika an'izao tontolo izao isika.” INDRINDRA
Loving the narratives (and the content also) 😂https://t.co/EDD2rQHe6l 
Mankafy ny fitantarana (sy ny votoatiny ihany koa)
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ity mpanoratra ity, nanamarika i Hera Diani fa nitombo 30 hatramin'ny 50 isanjato vao haingana ireo lehilahy mpamaky ny Magdalene. Nanampy izy fa maro tamin'ireo lehilahy mpamaky no naneho ny fankasitrahany ireo lahatsoratra manome fanazavana navoakan'ny gazetiboky. Naneho hevitra mikasika ny fomba nanokafan'ny lahatsoratra Magdalene ny sain'izy ireo mikasika ny fanjakazakan-dehilahy, ny fihetsika fankahalana vehivavy sy faneren'ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy izay mbola misy eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ireo LGBT mpamaky.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/23/117988/
 fanalam-baraka vatana: http://magdalene.co/news-1596-how-accepting-my-body-makes-me-the-happiest-version-of-myself.html
 April 10, 2018: https://twitter.com/azmiroyalaeni/status/983528788934868992?ref_src=twsrc%5Etfw
 April 2, 2018: https://twitter.com/fanybecks/status/980659646762336256?ref_src=twsrc%5Etfw
 April 10, 2018: https://twitter.com/julianisatya/status/983680048925368320?ref_src=twsrc%5Etfw